War cusub: Maxaadan Ogeyn oo Amisom ay ka tiri Haweeney Da’ah oo Ciidankooda ay si Arxan daro ah Muqdisho ugu dileen??? – Kismaayo24 News Agency
War cusub: Maxaadan Ogeyn oo Amisom ay ka tiri Haweeney Da’ah oo Ciidankooda ay si Arxan daro ah Muqdisho ugu dileen???
by Tifaftiraha K24 17th December 2016 023
Ciidanka Midowga Afrika ee Amisom ayaa war kasoo saaray Gaari ay leeyihiin ciidankooda Khamiistii Afaafka hore ee Hotelka Jaziira ku jiiray Qof Dumar ah.
War kasoo baxay Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu sheegay in Falkaasi uu ahaa mid laga naxo ,islamarkaana dhacdadaasi ay baaritaano dheeraad ah ku sameyn doonaan dowladda Soomaaliya iyo Ciidanka AMISOM oo iskaashanaya.
AMISOM ayaa sheegaytay in shilkaasi uu u dhacay si kadis , islamarkaana ay raaci doonaan Sharciga Taraafikada ee gobolka Banaadir.
Wakiilka gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ahna madaxa Amisom, Danjire Francisco Madeira, ayaa sheegay in uu tacsi u dirayo qoyskii iyo dadkii ay ka dhimatay Haweenaydaasi , waxaana uu falkaasi uu ku tilmaamay mid Nasiib daro ah oo loo baahan yahay in wax badan laga qabto.
Waxaa uu sheegay in ciidanka Amisom ayaa qaadi doonaan tilaabo kaste oo lagu doonayo in wax looga qabto dhibaatooyinka ciidanka AMISOM ay gaarsiiyeen Bulshada Soomaaliyeed.
Khaamiistii aynu kasoo gudubnay Gaari ay leeyihiin Ciidanka Amisom ayaa waxa uu Haweeney Da’ah ku jiiray Wadada Dheer ee aada Dhanka Garoonka diyaaradaha ee Magaalda Muqdisho waxaana gaariga jiiray Haweeneydaas uu isku dayay in uu Baxsado Balse Markii dambo Ciidamada Dowlada ayaa ceersaday oo gacanta kusoo dhigan Gaariga sida la sheegay.
Dhageyso: Xasuuqii ugu Darnaay oo xalay ka dhacay Dagmada Qoryoole Kadib Markii Gaari homey ah oo shacab ay la socdeen lagu dhuftay Qori Saban ah
Xog: Dowladda Kenya oo shaacisay in Sheekh Dulyadeyn uu ku biiray Garabka Daacish ee Kooxda Al-Shabaab.
admin 27th December 2015 14th March 2016
Faahfaahinta Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Xoogga Dalka oo lagu toogtay Muqdisho
Dhageyso : Wareysi Gaar ah oo uu Gudoomiyaha Gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil siiyay Shabakadda Kismaayo24.